Indlu esemaphandleni ngaselwandle - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni ngaselwandle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLeslie
Indlu yabucala ephambi kolwandle. Izinyuko ezijikelezayo ukuya kwigumbi lokulala elikumgangatho wesibini. Iingcango zeglasi ezityibilikayo zivuleleka ukusonga-jikelele umgangatho kunye nengca ethambekele eLwandle. 300 + iinyawo ezinzulu zamanzi angaphambili. Yohlulwe kwingca ngelitye elibanzi. Indawo egqibeleleyo yokutshisa ilanga okanye ukubasa umlilo ngokuhlwa.
Yonwabela ikofu yakho yasekuseni ubukele iilobster kunye nezikhephe zeseyile kwiMussel Ridge Channel. Iimbono ezingakholelekiyo nezinoxolo ukuya elwandle nakumantla eCamden Hills. Iimbono ezingenakuthelekiswa nanto kuyo yonke indawo.
Silusapho oluthanda iikreyifishi ngoko ke ukuba ufuna iikreyifishi siza kuzihambisa kanye xa ziphuma enqanaweni. Umyeni wam uGordon unika ukhenketho lwe-ECO kwi-lobsterboat xa ishedyuli yakhe ibonelela. Ukuhamba ngenqanawa ngeWindjammer, intenetya yegalufa, ukukhwela intaba, iimyuziyam Ukufikelela kwiziqithi ezikufutshane. Ibekwe kwindawo esembindini
Sihlala kwindlela yabucala efileyo kangangokuba i-traffic encinci kakhulu. Umyeni wam ngulobsterman ngoko ke uhlala ekhona. Unika uhambo lwe-eco boat ukuya kwiziqithi ezijikelezileyo xa enokuthi alifake kwishedyuli yakhe.
Andizange ndibize imali yokucoca kodwa ndilindele ukuba indlu ishiywe icocekile kwaye icocekile.
Indlu yethu ikwenye yeehektare ezingasemva. Sikufutshane ukuba uyasidinga kodwa asingeneleli. Sinenja ye-Pilot ene-run ye-acreage kwaye uya kumbona yonke imihla. Siyakwamkela izilwanyana zasekhaya okoko nje zinobuhlobo kwaye ziziphathe kakuhle UPilot usoloko ekhangela umntu adlala naye. Sihlawulisa i-50 yeedola ngazo naziphi na izilwanyana zasekhaya.
Indlu yethu ikwenye yeehektare ezingasemva. Sikufutshane ukuba uyasidinga kodwa asingeneleli. Sinenja ye-Pilot ene-run ye-acreage kwaye uya kumbona yonke imihla. Siyakwamkela izilw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- South Thomaston